अब मानिसले कुकुरसँग आफ्नै भाषामा खुलेर कुरा गर्न सक्नेछन् ! - Internet Khabar
अब मानिसले कुकुरसँग आफ्नै भाषामा खुलेर कुरा गर्न सक्नेछन् !
February 11, 2018 Internet Khabar Desk
एजेन्सी । एक पटक सोच्नुहोस् त तपाईले घरमा पाल्नु भएको कुकुरले तपाईको जवाफ तपाईकै भाषामा दिन सक्छ त ? तपाईलाई यस कुराले अचम्मिच बनाउन सक्छ। तर अब आश्चर्य नमान्नुहोस्, त्यो दिन टाडा छैन, अब मानिसले कुकुरसँग कुरा गरिरहेको देख्न सकिने। केही समयपछि तपाईले कुकुरसँग आफ्नै भाषामा खुलेर कुरा गर्न सक्नुहुनेछ।
माओवादी केन्द्रमा विवाद सुरु, कसले गर्दैछ नेतृत्व ?
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनलाई उत्तर कोरियाका नेता किमको निम्तो
September 4, 2017 July 28, 2018
यी हुन् ‘चुम्बक बालक’ चम्चादेखि डाडुसम्म शरीरमा टाँसिन्छन्